देउवा सरकार टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली जस्तै हो -केपी ओली – List Khabar
Home / राजनीति / देउवा सरकार टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली जस्तै हो -केपी ओली
देउवा सरकार टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली जस्तै हो -केपी ओली
admin July 20, 2021 राजनीति Leaveacomment 41 Views
रामकुमारी झाक्रीले दिउँसै यस्तो हर्कत गरिरहेको भिडियो बाहिरियो, भाइरल नै बनेपछि झाक्री तनावमा !
भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानीपोखरी, बन्द गर ओली याद आउने चिजहरु’- ओली
के त्यसो गर्न केपी ओली साँच्चै तयार छन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कवाडीको रिसाइकलबाट भाँडाकुँडा बटुलेर बनेको बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै देउवाले पाएको विश्वासको मतलाई ओलीले कवाडीको रिसाइकलबाट भाँडाकुँडा बटुलेर बनेको बताएका हुन् ।
‘देउवाले लिएको विश्वासको मत कवाडीको रिसाइकलबाट भाँडाकुँडा बटुलेर बनेको टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली भन्ने खालेको हो,’ ओलीले कटाक्ष गरे । देउवा सरकारले अब सत्ताको दुरुपयोग गरी एमालेमाथि हमला शुरु गर्ने उनले बताए ।
‘जनविरोधी काम शुरु गर्छन् । हाम्रो पंक्तिमाथि हुने सम्भाव्य षड्यन्त्र र आक्रमण अनुमान गरेका छौं,’ ओलीले भने । काँग्रेस विगतदेखि नै आफैं आक्रमण गर्ने र आफैं मुद्दा हाल्ने पार्टी भएको ओलीले आरोप लगाए ।
थप सामग्री – एमाले सांसद नविना लामाको चिन्ता – हाम्रो पुस्ताको राजनीति बर्बाद भयो ! नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामाले एउटा पार्टीमा राजनीति गरेर अर्को पार्टीमा भोट किन भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै उनले पार्टीभित्रको गुटबन्दी कोभिड जस्तै नयाँ प्रकृतिको रहेको बताउँदै बर्बाद भएको बताएकी छिन् ।
उनले जनताको बहुदलीय जनवाद खोइ भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्–‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास केलाएर हेर्दा फुट विभाजन विचार, व्यवस्था भन्दा बढी आफू केन्द्रित पदको लडाइँमा गुटबन्दीले पार्टीलाई सत्यानाश गरेको देखिन्छ । महान् नेताहरूको र कार्यकर्ताहरूको उज्ज्वल भविष्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिले नेकपा विभाजन पनि त्यस्तै देखिएको छ ।’
उनले अहिले नेकपा एमाले भित्रको पनि गुटबन्दी बडो खतरनाक र कोभिड जस्तै नयाँ प्रकृतिको रहेको बताएकी छिन् । आफ्नो पार्टीको सरकार ढलाएर अर्को पार्टीलाई सरकार बनाउनु यो भन्दा अर्को दुःखद घटना केही नहुने उनको भनाई छ । उनले भनेकी छिन्–‘यो भन्दा दुःखद घटना के हुन सक्छ ?? बर्बाद भयो । जबज खोइ ??? हाम्रो पुस्ताको राजनीति?? हाम्रो पार्टीको राजनीति पार्टी एमाले भोट अर्को अर्को पार्टी हो???’
आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
Previous चितवनकी सुजिता भण्डारीको पछिल्लो अपडेट आयो यस्तो
Next नेपाल आएको ३ लाख डोज खोप गायव,स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन,,,
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेका …